पुरुषले अर्काकी श्रीमति फकाउन हुने तर महिलाले अर्काको लोग्ने फकाउन नहुने ? « Light Nepal
निरुपा प्रसून मूलत: महिलाभित्र देखा पर्ने दमित प्रेम र यौनलाई अक्षरमा उतार्ने लेखिका हुन् । अभिलासा (२०६३) कविता–संग्रह, अभिषेक (२०६६) उपन्यास तथा तिम्रो लोग्ने र म (२०७१) गरी ३ वटा पुस्तक बजारमा ल्याइसकेकी निरुपा पुराना कवि चितवन शिखरवासकी छोरी हुन् । कथा–संग्रह ‘तिम्रो लोग्ने र म’ बजारमा आएपछि उनी आलोचितसमेत भएकी थिइन् । प्रसिद्ध कथाकार मनु ब्राजाकीको कथा–संग्रह ‘तिम्री स्वास्नी र म’ कै शैलीमा लेखिएको ‘तिम्रो लोग्ने र म’ र उनको लेखनका विषयमा निरुपासँग साप्ताहिकको कुराकानी :
त्यो कथा २०६८ सालको मधुपर्कमा प्रकाशित भयो । छापिनुअघि यति धेरै प्रतिक्रिया आउला भन्नेचाहिँ लागेको थिएन । नकारात्मकभन्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया बढी पाएँ । स्वयं मनु ब्राजाकीले– ‘महिलाले महिलाका पक्षबाट कसैले यो कथा लेखोस् भन्ने चाहेको थिएँ, तपाईंले लेख्नुभयो । तपाईंलाई धन्यवाद र बधाई छ ।’ भन्नुभयो । लोग्नेमान्छेले अर्काकी स्वास्नी फकाउन मिल्छ भने स्वास्नीमान्छेले अर्काको लोग्ने फकाउन किन मिल्दैन ? चर्चामा आउन पुरानै कुरा दोहोर्‍याएर लेखेको भनेर केहीले आलोचना नगरेका होइनन् तर ती कुरालाई मैले गौण मानेकी छु ।
मेरो बुवा चितवन शिखरवास आफैंमा त्यो बेलाको प्रसिद्ध कवि हुनुहुन्थ्यो । उहाँका पाँचवटा पुस्तक प्रकाशित छन् । उहाँ राजा महेन्द्रको हातबाट स्वर्ण पदक र भारतीय दूतावासबाट पुरस्कृत हुनुभएको थियो । उहाँ हिन्दीमा धेरै लेख्ने भएकाले पनि नेपालमा भन्दा भारतमा परिचित हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि मेरो लेखनमा उहाँको खासै योगदान छैन । बरु जिल्लास्तरीय प्रतियोगिताहरूमा भाग लिँदा म स्वर्ण पदक जित्थेँ, तर मानिसहरू बुवाले लेखिदिनुभएको भनेर मेरो मानमर्दन गर्थें । कान्छो दाजुले भने मेरो लेखनलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो ।
चितवनबाट भर्खरै काठमाडौं आएकी थिएँ कलेज पढ्न । बालकविता लेखेर पुरस्कार पाए पनि लेखिका हुन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास थिएन । त्यति बेला महिला आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिता पनि गराएको थियो । त्यसमा मेरो कविताले विशेष पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो । त्यतिबेला मेरो दाजुले चिनेजानेका मानिसहरूलाई मिठाई ख्वाउनुभएको थियो । उहाँले तिमी सबैथोक छाडेर लेख्न थाल भनेर हौसला दिनुभयो । उक्त घटनापछि म पूर्ण रूपमा लेखनमा आएँ ।
केही पुस्तकमा गुदी कम हुन्छन् तर तिनको हल्ला बढी हुने गरेको छ । यद्यपि युवाहरूमा पुस्तक पढ्ने बानी बसाउन यस्ता पुस्तक आवश्यक छन् ।
–निरुपा प्रसून, साहित्यकार
अश्विनी कोइराला ले कान्तिपुर साप्ताहिकमा लिएको अन्तर्वार्ता हामीले साभार गरेका हौ